प्रचार प्रसारमा आक्रामक बन्दै (डमरुको डण्डीबियो) ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > प्रचार प्रसारमा आक्रामक बन्दै (डमरुको डण्डीबियो) !
प्रचार प्रसारमा आक्रामक बन्दै (डमरुको डण्डीबियो) !
April 24, 2018 Nepali
बैशाख २१ गतेबाट प्रर्दशन हुन लागेको चलचित्र डमरुको डण्डीबियोंले प्रचार प्रसारलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको छ । यसै क्रममा निर्माण पक्षले आज मंगलबार राजधानीमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा चलचित्रका धेरै कलाकारहरु उपस्थित नभएपनि खगेन्द्र लामिछानेले अन्य कलाकारको अनुपस्थितीको अनुभुती हुन दिएका थिएनन् ।
कार्यक्रममा कलाकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै खगेन्द्र एक्लै उपस्थित भएका थिए भने निर्देशक छेतेन गुरुङ्ग र निर्माता बिनोद गुरुङ्गको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
डण्डीबियों खेलको विषयमा असी प्रतिशत भन्दा धेरै नेपालीलाई जानकारी भएको कारणले गर्दा र यो एउटा हामी नेपालीको मौलीक चलचित्र भएकाले ब्यावसायीक रुपमा सफल हुने कुरामा आफु ढुक्क रहेको पत्रकारहरु माझ खगेन्द्रले बताएका छन् ।
करीब एक वर्ष पहिले सम्म नेपालको राष्ट्रीय खेलको रुपमा रहेको डण्डीबियों खेलको विषयमा चलचित्र निर्माण गरेर आफुले आफ्नो कर्तब्य पुरा गरेको निर्माता बिनोद गुरुङ्ग दाबी गरेका छन् ।
अन्य देशमा यस्ता मौलीक विषयमा चलचित्र निर्माण गर्नेलाई सरकारले राजस्व छुट गर्ने परम्परा रहँदै आएकाले यहाँ पनि सरकारबाट यो चलचित्रलाई राजस्व छुट गराउने विषयमा केही पहल भएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै निर्माता गुरुङ्गले, त्यो सरकारको काम हो, त्यसमा आफुहरुले कुनै पहल नगरेको स्पष्ट पारे ।
चलचित्रको विषयमा बोल्दै निर्देशन छेतेन गुरुङ्गले यो चलचित्र भित्र डण्डीबियोंको विषय मात्रै नभएर घरपरिवार, मायाँ प्रेम सबै भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो चलचित्रले मौलीक कथा उठाएको र प्रस्तुतीकरण पनि मौलीक नै भएको दाबी गरेका छन् ।
चलचित्रमा खगेन्द्रका अलावा अनुप बराल,मेनुका प्रधान,आशान्त शर्मा,बुद्धि तामाङ्ग,अंकित खड्का, लक्ष्मी बर्देवा लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।